I-China Neodymium Fluoride NdF3 Ukukhiqiza neFektri | I-Liche
INeodymium Fluoride (NdF3), Purity≥99.9% CAS No.: 13709-42-7 Isisindo Semolekyuli: 201.24 Iphuzu lokuncibilika: 1410 ° C Incazelo INeodymium (III) I-Fluoride, eyaziwa nangokuthi yiNeodymium Trifluoride, iyinhlanganisela ye-crystalline ionic. Ijwayele ukusetshenziselwa ukwenza ama-Nd-Mg alloys, ingilazi, i-crystal nama-capacitors, izinto ezibazekayo. INeodymium Fluoride isetshenziselwa ingilazi, i-crystal nama-capacitors, futhi iyinto eluhlaza eluhlaza yokwenza iNeodymium Metal kanye nama-alloys. INeodymium ineqembu lokumunca eliqinile ...
I-Neodymium Fluoride (NdF3), Ukuhlanzeka≥99.9%
Inombolo ye-CAS: 13709-42-7
Isisindo Yamamolekhula: 201.24
Iphuzu lokuncibilika: 1410 ° C
I-Neodymium (III) Fluoride, eyaziwa nangokuthi i-Neodymium Trifluoride, iyinhlanganisela ye-crystalline ionic. Ijwayele ukusetshenziselwa ukwenza ama-Nd-Mg alloys, ingilazi, i-crystal nama-capacitors, izinto ezibazekayo.
INeodymium Fluoride isetshenziselwa ingilazi, i-crystal nama-capacitors, futhi iyinto eluhlaza eluhlaza yokwenza iNeodymium Metal kanye nama-alloys. INeodymium inebhande eliqinile lokumunca eligxile ku-580 nm, elisondele kakhulu ezingeni eliphezulu lokuzwela kwamehlo womuntu okwenza libe lusizo kumalensi avikelayo wokugoqa izibuko. Iphinde isetshenziswe ekubonisweni kweCRT ukuthuthukisa umehluko phakathi kokubomvu nemifino. Kubaluleke kakhulu ekukhiqizeni ingilazi ngombala wayo onsomi okhangayo engilazini.
- ingilazi, i-crystal nama-capacitors
- Ama-alloys wensimbi neodymium
- amalensi wokuvikela wokugoqa izibuko
- CRT ekhombisa
Esedlule: ILanthanum Fluoride LaF3
Olandelayo: Samarium Fluoride SmF3